Hagaha Habboon ee Habboon ee Barashada Isbaanishka
Posted by Tranquillus | Feb 3, 2018 | Luqadda shisheeye
Soo koobid: Tilmaan-bixiyaha ku saabsan kheyraadka ugu wanaagsan ee lagu baranayo Isbaanish.
Meelaha loogu talagalay barashada kala duwan iyo akhriska (akhriska, qorista, erayada, sheekooyinka, naxwaha, iwm)
Xulo fiidiyoow ah iyo podcasts si ay ula qabsadaan si fudud
Ku raaxee inaad si fudud u barto
Ka shaqeeyaa lahjaddaada si aad u ekaato goob dhab ah
Baro n 'meel kasta iyada oo loo marayo barnaamijyada gacanta
Geeska loogu talagalay carruurtaada iyo dhalinyarada
Buenos dias! Ma dooneysaa inaad barato Isbaanish?
Ma dhihi karno inta badan nagu filan, Isbaanishku waa ku dhowaad 500 milyan oo qof iyo luqadda rasmiga ah ama rasmiga ah ee 21 dal! Tirooyinkan la taaban karo ayaa ka dhigaya luuqadda labaad ee loogu hadal-haynta badan yahay adduunka maanta, wax yar uun ka dambeeya Mandarin.
Marka laga soo tago tirooyinkan, waa luuqada labaad ee la baranayey ee adduunka ka dib markii Ingiriisi ay ka badan yihiin 40 million bartayaasha, oo ku baahsan wadamada 90. Mastarinta Spanish waxay noqotay baahi dhab ah.
Tusaale ahaan, ku dhawaad ​​dhammaan dugsiyadu waxay bixiyaan luuqad luuqadeedka caanka ah ee ugu caansan ama labaad ah.
Marka laga soo tago dhacdadan, shirkadaha ayaa sidoo kale ay ku lug yeeshaan oo waxay bilaabayaan inay u arkaan inay tahay guusha guusha laga gaaray ganacsiga, gaar ahaan suuqyada Koonfurta Ameerika. Xaqiiqdii adigoo ogaanaya luqada labaad ee ugu hadasha adduunka ayaa ku dari doona xadhig xurmo u leh qaansadaada. Socdaalka sida noloshaada xirfadeed, mar walbaa faa'iido leh!
Qofka Faransiiska ah, barashada luqadda Luqad oo kale sida Isbaanishku wuxuu u muuqanayaa mid aad u fudud unauna kuu ogolaanayaa inaad si degdeg ah wax u barto. Dhammaan wixii aad sameysid waa la gelinayaa wax yar oo mahadnaq ah, waxaanu wadajir u haynaa hagid dhamaystiran! Waxaad awoodi doontaa inaad sahamiso dhammaan kheyraadka lagama maarmaanka u ah waxbarashadaada Isbanishka oo ku qoran maqaal dhamaystiran oo sahlan.
Samee doorashooyinkaaga: bilowga, dhexdhexaad ama ka sareeya waxaad ku heli doontaa farxad marka loo eego heerkaaga! Adeegyada lacag bixinta ama adeegyada bilaashka ah: blogska ugu wanaagsan, codsiyada moobiilka, filimyada, bogagga, goobaha khaaska ah, waxaad ku yeelan doontaa furayaasha oo idil si aad ugu bilowdo tababarkaada dhamaystiran.
Hadda ka dib "No Comprendo" kama sii mid ahaan doontid erayadaada!
Plethora goobaha guud waxay ku yaalaan shabakadda! Waxaan dooranay blogska ugu wanaagsan, boggaga gaarka ah iyo iskaashiga, joornaalada, qaamuusyada, ugu dhameystiran iyo xirfadle. Kuwa kaa caawin doona si aasaasi ah si ay u bartaan ama u dhammeeyaan dhammaan dhinacyada luqadda. Kala hadal erayadaada, akhri, iskudubarid, qoro oo ku tababar. Himiladu? Ha ka baqin inaad wadahadal la gasho, ha ahaato mid xirfad leh ama ka weyn qaxwaha, la hadal kalsooni iyo hoy.
Luuqadaha BBC Spanish :
website-ka rasmiga ah ee BBC caanka ah, ka sokow isagoo laga qodo dahabka ee macluumaadka si ay u bartaan Ingiriisi ah, waxaa kale oo ay bixisaa koorsooyin online free bilowga ah iyo heerka dhexe oo tayo fiican! Grammar, erayada, tibaaxaha qasan qiyaas wanaagsan oo warbaahinta sida raadiyaha, TV, videos, magazine. Mudo gaaban, waxay haysaa qadiyadeeda iyo khibradeedba ee dhinaca barashada luqadda.
CNED waxay dejisay barnaamij cusub: "#jeveuxparler". Kani wuxuu bixiyaa koorsooyin onlayn ah iyo wadahadal taleefan.
Waxaad dooranaysaa 3-bilood, 6-bilood ama 12-bilood is-diiwaangelintaada, oo aan xadidnayn dhammaan agabka iyo hawlaha. Waxa kale oo aad dooran kartaa kulano gaar ah sida ku celcelinta afka ilaa 30-daqiiqo kulamo wada hadal ah oo lala yeesho tababarayaasha ku hadla Isbaanishka. Barnaamij xirfad leh iyo in ka badan oo dhammaystiran si loo horumariyo xirfadahaaga!
Easy Spanish :
Bar Isbaanishka 100% bilaash ah goobtan!
site iskaashi run ah, koorsooyinka iyo layliyada in halkaas lagu soo bandhigay ay ahaayeen oo dhan abuuray by xubno ka diiwaangashan keliya ka dib markii Moderators ansixinta. Xiiseyntu waxay tahay inay iyagu yihiin qayb ka mid ah bulshada. Sidaa darteed, model this sidoo kale u oggolaan doona in aad si aad u hesho oo aad gacmihiinna ku lugta iyo dhismaha keena dhagax iyadoo la siinayo content. Iyada oo 4 million xisaab abuuray, waa bulsho oo dhab ah aad ka danbeeya, oggolaanayo in aad horumar ee imtixaanka xawaaraha breakneck heerarka, koorsooyinka iyo layliyada ee higaada, naxwaha, audio, jimicsi dhawaaq, kulan, forums in sarrifka bulshada dhexdeeda ... marar dhif ah ayaan ku aragnaa goobta leh fikrado badan iyo qalab bilaash ah.
Waa nooc kale oo ah majaladda internetka, si aad u akhrido iyada oo aanad dhexdhexaadin, kaas oo isu keenaya maqaallo ku saabsan dhaqanka, dhirta, takhasuska culus, juqraafi iyo bulshada wadamada Isbanishka ku hadla. Qodob kasta waxaa la socda fayl maqal ah oo la heli karo sida podcast.
Kuwa bilowga ah: Qalabka barashada waa hab fudud oo lagu baran karo internetka Isbanishka bilaash ah. Qalabkan macquulka ah ee waxtarka leh, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho luuqada Spanishka aasaasiga ah: ereyada caamka ah, luuqada uu yaqaan, lambarrada, wada hadal fudud.
Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa buugga e-buugga, ka shaqeyn kartaa ficillo iyo naxwaha qaababka laylinta fahamka.
Majallad Faransiis ah oo ku jirta daabacaad ama internetka. Aad waxtar badan ugu leh barashada akhriska iyo qorista Isbaanishka. Waxay ka kooban tahay maqaallo, laakiin sidoo kale xaashiyo erayo ah oo kaa caawinaya inaad barato ereyo cusub. Halkaas waxaad ka heli doontaa imtixaanno onlayn ah, talo ku saabsan luqadda. Xirmooyinka kaladuwan ayaa la heli karaa sida: warqad buuxda + akhriska dhijitaalka ah ee Isbaanishka ah si loogu tababaro fahamka iyo hagaajinta dhawaaqaaga. Waxaad fahmi doontaa in boggan uu yahay barxad aad ka abuureyso aaggaaga xubin ka ah. Qaaciddooyinka la bixiyo dhammaantood waa lacag. Vocable waa urur la aqoonsan yahay oo ku takhasusay joogitaanka luqadda muddo ka badan 30 sano. Waxay bixisaa koorsooyin luqadeed oo ku yaal in ka badan 30 dal.
Koorsada Isbaanishka :
Aad u fududahay in la isticmaalo isdhexgalka oo leh marin furan oo furan koorsooyin badan sida alifbeetada, ku dhawaaqida, higgaadinta, shaqallada, weedhaha iyo muujinta, casharo maqal iyo muuqaal ah. Waxa kale oo aad leedahay qayb yar oo ku saabsan safarka iyo dhaqanka oo ay ku jiraan maqaallo u dhexeeya "taariikhda Isbaanishka" illaa "kubbadda cagta Spain", oo xiiso leh in wax badan laga ogaado!
Isbaanish iyo Goldrina :
Canadian wuxuu bixiyaa koorasyo ​​bilaash ah boggeeda internetka. Naxwaha, erayada erayada, laylinta, hawlaha gacmaha iyo ciyaaraha internetka si loo bilaabo barashada. Waxay sharaxeysaa in ay bilowday tababarka fasal hal usbuucii kaddibna kaligiis oo ay la socoto buugaag iyo cajalado ... waxaad arkaysaa wax walba oo suurogal ah, waa inaad bilowdaa!
Luuqada Isbaanishka ee looga hadlo 21 wadan daruuri waxay leedahay ereyo macno kaladuwan leh oo kuxiran wadanka. Halkan waxaa ku takhasusay boggan, caqli iyo wax ku ool ah, waxay kaa caawin doontaa inaad hesho habka aad ku hareeraysid si aad u sharaxdo macnaha macnaha kala duwan ee ereyada (erey bixin ama ereyo caan ah) iyadoo ku xiran waddanka. Sidaa darteed, wadan ahaan waxaad lahaan doontaa ereyo leh qeexitaanadooda saxda ah. Boggan waxaa loogu yeeri karaa qaamuus Laatiin ah, waa mid ay adeegsadaan dadka isticmaala, markaa ha ka waaban inaad ka qaybgasho haddii aad barato ereyo cusub!
READ Tilmaamaha si loo helo khayraadka ugu fiican ee lagu baran karo Faransiis
Lecturas baaso baas ah :
Boggan bilaashka ah wuxuu ku takhasusay akhriska. Macmiilku waa gebi ahaanba Isbaanish. Waxba ma jecla waxbarashada barashada! Aan kuu hanuuninno! Waxaad kaloo leyliyada ku haboon tahay bilowga bilowga, dhexdhexaadka ah iyo heerarka sare.
Meel aad wax ku ool ah, sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad isku xirto fal kasta oo Isbaanish ah! Geli falkaaga oo guji conjugated si aad u aragto "isku xidhka Isbaanishka". Faa'iido leh oo sahlan, sidoo kale waxaad leedahay jimicsi, ciyaaro iyo xeerar naxwaha.
Tallaabo-tallaabo oo Isbaanish ah :
Karim Joutet, Macallin Isbaanish ah, wuxuu ka hadlayaa noloshiisa Spain, safarkiisa, dhaqanka Isbaanishka iyada oo loo marayo blogkan. Wuxuu siinayaa talooyin iyo xirfado si uu u bilaabo talaabo Isbaanish ah tallaabo tallaabo ah marka magacu soo jeediyo. Waxaad leedahay qayb fiidiyoo oo aad ku qaadato boggiisa YouTube. Wadaagista dhabta ah ee waayo-aragnimada iyo aadanaha!
Boggan bilaashka ah ayaa qayb ka mid ah qaybta qaybta gaaban: wakhtiyada, jumladaha, ficilada, magac-celinta, soo-jeedinta ... macluumaad badan oo kaa caawin doona inaad ku tababarto inaad si sax ah u hadashid! Maqnaansho dheeraad ah oo la leh meeshan! Waxaad sidoo kale leylisaa jimicsi qaab ah aqoon isweydaarsi.
Haddii aad haysato xusuusta muuqaalka iyo maqalka, qaybtan ayaa adiga kuu ah.
La heli karo, videos iyo podcasts waa hab weyn oo lagu baran karo luqad. Inta aad madadaalinayso iyo qaab jimicsi ah, waad ku baran kartaa meel kasta iyo markaad rabto inaad dhex dhexaadiso.
Fiidiyowga ayaa u soo baxa si ay u bartaan dheecaan iyo xajmiga!
Waxaan soo bandhignaa boggaga ugu fiican, fiidiyowyada ama qulqulka YouTube si ay kuugu tababaraan Isbaanish.
Wararka ku hadla afka Spanishka :
Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu sareeya ee bixiya podcasts! Digniinta goobta waxaa loogu talagalay dadka leh heer dhexdhexaad ah iyo heer sare. Muuqaaladani waxay ku jiraan qaabab iyo dhacdooyin. Waxay kuu ogolaanayaan inaad dhageysatid waxyaabo waxtar leh oo aad ku baran kartid erayo aad u macquulsan oo ku saabsan mawduucyo kala duwan: madadaalo, ekoloji, siyaasad, dhaqaale, iwm. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli doontaa kaararka erayada ee u dhigma xaalad kasta.
Xaqiiqdii goobta ugu fiican ee ladagaasho ee kuu ogolaanaya inaad hesho macluumaad ku habboon si fudud oo Isbaanish ah oo ku habboon qowmiyadaha barashada ee bixiya isku dheelitir wanaagsan iyo dhammaanba, usbuuc kasta!
Macalinka Macallinka :
Boggani wuxuu taxaa casharo fara badan oo loogu talagalay kuwa bilowga ah: fiidiyoowga isdhexgalka sida muuqaallada nolosha ama diiradda saaraan midabada, lambarrada, sida loo soo bandhigo, iwm. Waxaad kaloo lee dahay layliyada naxwaha, su'aalaha. Fiidiyow kasta wuxuu socdaa inta u dhaxaysa 3 iyo 6 daqiiqado waxaana la socdaa qoraalka uu ka kooban yahay. Ku fiican kuwa bilowga ah iyo khayraadka aad ayay u wanaagsan yihiin. Faa'iidada ugu weyn ee boggani waa sida magaciisu soo jeediyo, fiidiyowyada muusikada, sidaas darteed waxaad heli kartaa koorsooyin internetka ah oo gebi ahaanba dhammaan maadooyinka dugsiga aan ahayn Isbaanishka! Dib-u-fiirin yar ayaa mararka qaar waxyeello u geysan.
Ogeysiiska Isbaanish :
Boggani wuxuu ku qoran yahay Ingiriis, sidaa daraadeed waxaa lagugula talinayaa inaad haysato heer yar oo Ingiriis ah si aad u fahamto qaybaha iyo talaabooyinka. Waxaad fursad u heli doontaa fasalada horumarka ah iyada oo loo marayo xulasho ballaaran oo ah podcasts. Adiga ayaa dooranaya heerka aadna soo dejisid baqshaddaada (bixinta).
Goobtani waxay ku habboon tahay in lagu dheelo erayada iyo naxwaha si loo helo heer wanaagsan oo Spanish ah.
Waxyaabaha dheeraadka ah: waxaad dib u eegi doontaa Ingiriisi iyo Isbaanish.
Khasab Isbaanish :
Waxaa kula socon doona Kara, ardayga wax baranaya isla waqtiga adiga iyo Mark, macalinkaaga. Mar labaad, boggani wuxuu ku qoran yahay Ingiriis wuxuuna bixiyaa 80 fiidiyow kasta oo ka mid ah 15 ilaa daqiiqado 20 loogu talagalay bilowga. Waxaa sidoo kale jira barayaal loogu talagalay barayaal khibrad leh oo raba in ay xoojiyaan qoraalkooda iyo afka Spanishka iyagoo kobcinaya tibaaxaha iyo naxwaha!
Waxyaabaha qaarkood ayaa la bixin karaa, sababtoo ah waxaad haysataa baako aad ku iibsan kartid (4 heerarka kala duwan).
Podcast-kan waa mid aad u fiican oo bilawga ah, waxay bixisaa hal cashar maalintii maalintaas oo ku siineysa waqti aad ku barato oo wax u barto si habboon. Macallimiintu waxay u tarjumaan codka gaaban oo cad oo badi ereyada Isbaanishka ee Faransiiska. Weli waad dooran kartaa inta u dhaxeysa taxanaha kala duwan: dhibic naxwaha, jumlado iyo sheekooyin, ereyada. Goobtu waa mid dhexdhexaad ah oo sahlan oo la xariirta 300. A saldhig aad u wanaagsan oo bilowga ah.
Si aad u barato luqad si wax ku ool ah, habka ugu fiican waa in aad halkaas aado oo aad isku darsato dhaqankeeda. Inkastoo ayan marnaba awoodin in ay halkaas tagaan, A la Carta waxay bixisaa xulasho taxane ah oo TV ah, baraha iyo raadiyaha Isbaanishka. Maxaa loola jeedo qof kasta oo si dhakhso ah horumar u samee!
Boggani waa ururka Ecuadorian "Radialistas apasionadas y apasionados".
Waxaa laguugu soo bandhigi doonaa feylo badan oo maqal ah kuwaas oo wax ka qabta mawduucyo sida madani, juquraafi, taariikh ... sidoo kale waxaad ka heli doontaa shirar xiiso leh oo fiidiyow ah. Wixii cajalado ah, waxaad ka heli kartaa iyaga oo ah faylal qoraal ah kaas oo kaa caawin doona inaad si fiican u sawirtid fiidiyowyada. Isku darka dhabta ah ee dhaqanka G iyo Isbanishka ugu xiisaha badan.
Holamigo – baro Isbaanishka :
Channel channel wanaagsan oo leh fiidiyowyo kala duwan sida kooraska iyo dhaqanka Latin: dabagalaha Spanish, ficilada, qaladaadka badan, wadahadalka Isbaanishka, dhawaaqa. Wax walbaa waa inay kaa caawiyaan fahamka luqadda! Fiidiyowyadu waa kuwo gaaban, markaa way sahlanaan karaan inay diirada saaraan oo aysan jirin wax khasaare ah!
¡Marende español oo leh Saab! :
Diiwaanka 52 000 YouTube, Saby wuxuu baraa Isbanishka qaar ka mid ah fiidiyowyada si fiican loo qaabeeyey. Fiidiyowyada waa kuwo aad u cad oo qeexan leh sawirro leh turjumaad Isbaanish ah. Waa maxay ereygaaga.
Macluumaad wada shaqeyn oo asaasi ah oo faylasha maqalka ah, si ay u soo dejiyaan ama dhagaystaan ​​internetka, oo ay ku duubaan kuwa ku hadla afka Isbaanishka. Muuqaal aad u gaaban (oo ku saabsan 2 min), waxay si aad u fiican u habeysan yihiin oo ay ka diiwaan gashan yihiin CEFR (Qaabka guud ee Yurub ee Tixraaca Luqadaha). Waxay ku tusaysaa qaab caqli ah, waxaad ku ogaan kartaa raadintaada ereyada muhiimka ah, da'da, heerarka, luuqadaha, muddada .. Dhab ahaantii aad u fudud ee isticmaalka iyo taabashada. Habka ugu wanaagsan ee lagu baran karo Isbanishka farxad iyo wadaag.
READ Baro Shiinees waxtar leh - Qaali wax ku ool ah oo bilaash ah
Sida ugu wanaagsan ee wax loo barto waa in la raaxaysto. Waxaad si dhakhso ah u jeclaan kartaa inaad wax barato marka lagu sameeyo xaalado wanaagsan! Qaybtan waxa aan ku taxnay dhawr agab oo isugu jira barasho iyo madadaalo: ciyaaro, heeso, muuqaalo, shabakadaha bulshada...
Goob aad u wanaagsan oo lagu barto markaad ereyo ku ciyaareyso! Ku raaxayso barashada iyo xoojinta ereyadaada iyo ku dhawaaqidaada mahadsanid goobtan oo bixisa 1500 eray, 21 luqadood iyo 5 ciyaarood.
Adiga ayay kugu tahay!
Dhowr ciyaarood oo leh heerar kala duwan! Marka hore dooro heerarka 4 ee adag, ka dibna qayb kasta waxaad yeelan doontaa xulashada inta u dhaxaysa cayaaro badan: gaabnaanta, ciyaaraha macquulka ah, xujo, su'aalo xulasho oo badan, iwm. Macluumaad bilaash ah oo lacag la'aan ah oo si buuxda loogu qoro Isbanishka oo kaliya.
Bar Isbaanishka adiga oo heesaya waa halkan. Boggaan waxaad ka heli doontaa heeso xul ah oo Isbaanish ah, oo loo kala saaray saddex heer oo dhib ah: fudud, dhexdhexaad ah iyo mid adag. Markaad dhageysaneyso waxaad dooran kartaa nooca jimicsiga aad rabto. Isla markaad gujiso badhanka ciyaarta, habab kala duwan ayaa kuu diyaar ah: karaoke, bilow, dhexdhexaad iyo khabiir! Qaab asal ah oo xiiso leh oo wax lagu barto.
Ku wareegsan Yurub 80 maalmood gudahood - Isbaanish :
Goob waxbarasho oo luqado badan ku hadasha oo loogu talagalay dadka da'da yar ee raba inay wax ku bartaan kooxo yar yar ama si gaar ah, laakiin si madax-bannaan! Saddexda heer ee barashada luqadda: daahfurka erayada maalinlaha ah iyo tibaaxaha. Heerarka kale waa kuwo aad u horumarsan waxayna kuu oggolaanayaan inaad sii qoto dheeraato aqoontaada oo ay ku siiyaan macluumaadka ku saabsan dhaqanka iyo luqadda Isbaanishka. Habka lagu soo bandhigay boggan waa mid xiiso leh oo cusub.
Ciyaarta fiidyaha ah, ee lagu sameeyay hindisaha Midowga Laatiinka, ayaa bixisa hab cusub oo lagu barto Isbaanishka iyo Boortaqiiska online.
Limbo waa cayaar cayaareed oo lagu ciyaaro oo aad ku qaadato luuqad luuqadeed oo aad la kulmi doonto caqabado taxane ah. Adventures iyo istaraatiijiyada, waa wax badan oo loogu talagalay carruurta iyo dhalinyarada, laakiin waxaad u isticmaali kartaa inaad barato da 'kasta.
Bulshada sarrifka ah ee ku saleysan is-dhaafsiga. Waxaad baran doontaa luuqadaada hooyo loona yaqaan 'lammaane' isla markaana ku sameeya luuqadiisa! Mashruucan warbaahinta bulshada, waxaad kula kulmi doontaa dad ka socda wadamada 180 + oo ku hadlaya wax ka badan luqadaha 110. Markaad fahamto, waxaad ku tababaran doontaa bulshada oo dhan oo wadaagaya danahaaga iyo danahaaga. Hadafku waa in lagu sheekeysto sheekeysi ama fiidiyoow iyo fiidiyoowyo. Barnaamij ayaa laga heli karaa iTunes iyo GooglePlay.
Mar labaad oo ku salaysan bulshad, barxadkan ayaa kaa caawin doona inaad barato oo aad hagaajiso ereyadaada adoo akhrinaya faylasha si aad u soo dejiso, baraha oo keliya adiga, jimicsiga isdhexgalka iyo kaqeybgalka wadahadalka. Ku dhowaad shabakada bulshada, waxaad kula kulmi doontaa dadka, sida adiga, adduunka oo dhan, iyo sababta aadan u sameysan saaxiibo. Had iyo goor wanaagsan inaad cagta cagta ku hayso dhulka dhamaadka kale ee gurigaaga?
Waxaa sidoo kale laga helaa iTunes iyo GooglePlay
Naadiga Booliska :
Bulshada 730,000 maanta. Waxoogaa waxoogaa ka duwan, laakiin sida ugu fiican, tan iyo goobta ayaa kuu ogolaaneysa inaad la xiriirto dadka adoo la kulma si muuqaal ahaan ama jir ahaan si ay u bartaan luqadda. Shirarka caadiga ah waxaa lagu qabtaa goobaha dadweynaha ama baararka. Nidaam aad u fiican oo lagu dhaqmo.
Iyadoo aan laheyn sumcad xumo woxoogga Ingiriisiga ah, waxaan Faransiis nahay, waxaan u mahadcelineynaa lamaanaheena Laatiinka ah ee Isbaanishka, waxaanu awood u leenahay inaan ku dheelno dal wanaagsan. Waa inaad haysataa khayraadka saxda ah iyo xoogaa geesinimo ah taasina waa waxa aan ku bixinno halkan.
Barta Español :
Mashruuc gaar ah oo saldhig u ah ereyada ereyada, kuwaas oo naftooda, ayaa isticmaala internetka. Kaliya waa inaad ku qortaa kalmadaha bogga raadinta iyo goobta ayaa ku dhejin doonta ereyada kala duwan ee ereyada iyadoo loo eegayo astaamaha Isbaanishka. Isbarbardhig oo dooro lahjaddaada erayada 127.504 ee ku keydsan bogga!
Sidee loo wargaliyaa :
Qaamuuska dhawaaqa dhawaaq ee ku dhawaaqida luqado badan oo toos ah iyo bilaash! Ma jiraan wax ka fudud oo wax ku ool ah: waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad calaamadeyso sanduuqa "isbaanish" oo ku qor ereygaaga baarka baaritaanka. Ka dib, markaad gujiso dhawaaq ahaan, bogga wuxuu kugu hagaajinayaa bog gaar ah oo ku saabsan eraygaaga. Waxaad ka heli doontaa boggan: feyl maqal ah oo loogu dhawaaqayo, loona turjumayo luqado kale. Taabashada yar ee fiican waa nidaamka codeynta heerka dhibka ee ku dhawaaqida eray kasta (fudeyd, dhib badan, aad u adag).
Meel fudud :
Boggan waa wax aan ka badnayn nooc ku dhawaaqida "Google Translate". Tarjubaan luqadda Isbaanishka dhabta ah: ku qor qoraalkaaga Isbaanishka oo dhegeyso. Markaa waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku tababarto madax-bannaanida buuxda. Adigu waxaad kala dooraneysaa inta udhaxeysa ama Isbaanishka Mexico ka ah .. Waxyaabaha lagu kala duwan yahay raaxada!
Martin wuxuu kaa qaadayaa waddooyinka Spain, waxbana ma fiicna inuu barto lana hagaajiyo afkaaga filimaanta! Waxaad arki doontaa sheekooyinka caanka ah ee ay ka hadlaan marxaladaha, cinwaanada filimka iyo erayada lagu xalliyo mawduuca, wax walbana waa jiraan. Xitaa waxaad ka baran doontaa siyaabaha 10 si aad u dalbato barkad adoo eegaya sida goob dhab ah!
Fiidiyowyadu waa kuwo asal ah oo xiiso leh. Hab fiican oo lagu “xoojiyo Isbaanishka”: dhaqanka, safarka iyo waxbarashada oo la isku daro!
Baro meel kasta oo leh barnaamijyo mobile
Dhaqdhaqaaqa iyo fududaynta qaybtan!
Waxaan soo saarnay codsiyada moobiilka ee ugu sareeya ee loo aqoonsaday tayadooda sare ee waxbarashadooda. Hadda ka dib, u qaado macalinkaaga Spanishka jeebkaaga. Waxbarashadu waxay noqon doontaa hawsha ugu qanisan!
Codsiga MosaLingua, ee 4,49 euro, waa macalin Isbaanish dhab ah si uu kuugula qaado meel kasta! Habkiisa waxaa lagu dhejiyaa nidaam ku celcelin badan oo kuu ogolaanaya inaad barato ereyada iyo tibaaxaha diyaarsan, iyada oo ujeedadu tahay inaad si dhakhso ah ula xiriirto. Appku wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha daruuriga ah: ku dhawaaqida, erayada, fahamka. Hab aad u fudud oo lagu dhaqmo. Waxaa jira toban heer oo diyaar ah kuwaas oo si buuxda ula qabsanaya aqoontaada. Inta yar ee dheeriga ah: macalinkaaga casriga ah kama labalabayn inuu kuu digo markaad dayacdo waxbarashadaada.
READ Ilaha ugu Sarreeya ee Barashada Ingiriisiga
Barnaamijka Nemo waxaa laga heli karaa bilaash ah on iTunes ama GooglePlay. Codsigani wuxuu diiradda saarayaa afkaaga sababtoo ah wuxuu ku darayaa astaamaha maqalka iyadoo la isticmaalayo duubid.
Ku darista: waa mid si buuxda loo hagaajin karo, adiga ayay kugu xiran tahay inaad sameysatid goob waxbarasho oo kuu gaar ah oo ku saabsan is-maamul buuxa. Waa shaqo dhab ah oo xusuus ah, maxaa yeelay waxay diiradda saareysaa salka: ereyada iyo muujinta ugu badan. Ma jiro koorso dhab ah, waa halkii baris horumarineed oo shaqsiyan ah oo wax lagu barto iyadoo la raacayo rabitaankaaga.
Casharka Isbaanishka :
On iPhone ama Android, Isbaanish Isbaanish waa dalab lacageed ah 3,59 euros.
Habkiisa: casharrada dhammeystiran oo isbaanish ah oo isbarbardhigaya naxwaha, isku xirnaanta, erayada iyo layliska dhageysiga waxqabadka. Barnaamij fiican iyo tayada waxbaridda oo aad u wanaagsan, waxaad sidoo kale haysataa fursad aad ku shaqeyso afkaaga.
Mid ka mid ah apps-ka ugu caansan ilaa maanta, waa madadaalo iyo tayo sare leh. Sababta wanaagsan awgeed waxaad si dhakhso ah u noqon kartaa taageere. Mabda'a waa sida ciyaarta video mahad nidaamka bonus. Waxaad ku kasban doontaa dhibco jawaab kasta oo sax ah, waxaadna lumin doontaa dhibco mid kasta oo khaldan. Waxaad leedahay heerar kala duwan oo aad si tartiib tartiib ah ugu fuuli doonto casharro gaaban oo shan daqiiqo ah maalintii. Kaas oo kaa caawin doona inaad buuxiso godadkaaga inta lagu jiro maalintaada adigoo wax soo saar leh! Habka wuxuu ku salaysan yahay layliga tarjumaada.
Waxaa laga heli karaa Android iyo macruufka.
Babbel waa barnaamij aad u dhammeystiran oo ku faanaya inuu kugu kicin karo laba luuqadood.
Waxay bixisaa laba nooc oo kala duwan: ereyo ama qalab.
Waad ku mahadsan tahay is-dhexgalkeeda cayaareed, waxaad ogaan doontaa waxqabadyo is-dhexgal ah, jimicsi afka iyo qoraal ah. Xiisaha codsigu waa in laga barto Isbaanishka doodaha maalinlaha ah. Qalabku wuxuu ka kooban yahay aqoonsiga codka kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku shaqeyso lahjaddaada. Casharradu waxay socdaan 15 daqiiqo, aad bayna faa'iido ugu leeyihiin kuwa waqti yar ka hortooda. Markaa hal cashar maalintii ayaa kugu filan inaad kordhiso aqoontaada Isbaanishka.
Barashada Isbaanishka ee Babbel waa bilaash, si kastaba ha ahaatee si aad u hesho dhammaan koorsooyinka, waa inaad iska diiwaan gelisaa 9,99 euro bishii.
Barnaamij dhammaystiran oo lacag la'aan ah ayaa diirada lagu saaray barashada erayada!
Casharro kalmado kala duwan, wada sheekeysiyo maqal ah oo kuu ogolaanaya inaad kor u qaaddo dhegeysigaaga luqada, dhawaaqa, higgaadinta, naxwaha ... barashada cayaarta ciyaaraha iyo tijaabooyinka. Codsi ku haboon oo ku siinaya dhammaan furayaasha waxbarasho degdeg ah. Isku xirii si joogta ah iyada oo loo marayo habka ay ku shaqeyneyso, xiriirkaaga internetkaagu mar dambe ma aha cudurdaar.
Qofka yar yar ee aad bilowdo barashada luqad sida ugu dhakhsaha badan ee aad u sameyso. Tani waa wakhtigii aad ku tegi lahayd weerarka. Ku samee boggagaan kala duwan iyo barnaamijyada mobile-ka ee caruurtaada ama dhalaankaaga. Waa hada, ciyaaro, hal abuur leh, hab gaaban oo kale oo wax loo barto oo u dhameeyo dugsiga!
Educa luqadaha carruurta :
Goob aad u dhammaystiran oo leh tiro badan oo agab waxbarasho ah oo lagu baro Isbaanishka carruurta da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 11 jir. Faa'iidada boggan ayaa ah in ay bixiso habab kala duwan oo lagu taageerayo carruurtaada barashada Isbaanishka. Inta badan agabka waxbarasho ee la bixiyo waa lacag, laakiin aad u dhammaystiran: DVD-yada, buugaagta, CD-yada, majaladaha, heesaha xanaanada iyo ciyaaraha waxbarashada.
Si loo sii sii wado, waxay sidoo kale bixiyaan xulasho goobo waxbarasho oo Isbaanish ah si ay kuu siiyaan wax yar oo dheeri ah oo aad u baahan tahay. Taageerada ugu wanaagsan ee la bixiyo waa PetraLingua iyo Ereyadayda Kowaad.
Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad la xiriirto carruurtaada mawduucyada nolol maalmeedka iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyada adduunka ciyaaraha leh iyadoo ay ugu mahadcelinayaan geesiyeyaasha matalaya hababka barashada. Si aad ula wadaagto qoyskaaga, ka dhig carruurtaada inay tagaan xiisad!
Iyada oo ay ka mid tahay aag xubin ka ah, carruurtaada waxay isku dari karaan casharada iyo barashada luqadda.
Waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah xanaanada caruurta ilaa kulliyadda aad ka heli doonto layli wax ku ool ah xisaabta, Faransiiska ama soo kabashada. Dhinaceena, waxa noo xiiseynaya halkan waa ciyaaraha Isbaanish. Muuqaal dhab ah oo xariif ah oo isku dhaf ah layli macquul ah iyo cayaaro xiiso leh si ay u caawiyaan ilmahaaga inta lagu jiro barnaamijkooda dugsiga.
Isbaanishka ayaan ku baashaalayaa :
Codsi gacmeed loo yaqaan "Holà" oo lagu sameeyay Luqado Fudud. Waa iyada oo loo marayo heeso, ciyaaro, sheekooyin iyo buugaag ay carruurtaadu wax ku baran doonaan. Markaad dhex marto Barafka Cad, Cinderella, Quruxda Hurdada, sheeko kasta oo ka mid ah sheekooyinku waxay carruurtaada u soo bandhigi doonaan muujinta cusub iyo ereyo cusub. Madadaalo isku dhafan iyo muusig aan waligood ka daali doonin. Cayaartu waxay ku saleysan tahay xafidida sida kaararka lagu ciyaaro, midabeynta bogga, mala awaal, iwm. Codsigan mobilka ah wuxuu kaloo bixiyaa iibsashada buugaag, tan 1aad waa bilaash, waxaadna ku arki kartaa dhowr taleefan oo isticmaalaya isla koontada, halka kuwa kalena ay tahay in la bixiyo.
Iyada oo ku saleysan mabda'a isku mid cayaar ah, madal this bixisaa songs, madadaalo sida yaryar, xujooyinka, kulan xasuusta oo u oggolaan, marka lagu daro barashada luqada, si ay u bartaan dhaqanka Isbaanishka! Maxaa fura maskaxdaada yar yar, adigoon marnaba adigu marwalba ka dambeeya. Waa bilaash oo lacag la'aan ah!
Barnaamij kale oo moobi-socod ah (IOS iyo Android), oo loogu talagalay dhallaankaaga da'doodu tahay 5 illaa 10 sano. Waxay ku dhex mari doonaan caalamka ciyaaraha kubada cagta ah, taas oo ay ugu wacan tahay hab gaar ah oo ku saleysan afka, oo leh wax ka badan 200 waxqabadka! Si aad u sahlan in la isticmaalo, carruurtaada way jeclaan doonaan adiga iyo waliba!
Plus: Diiwaangelin u oggolaanaya xubnaha qoyska in ay helaan barnaamijyada 3: Pili Pop English, Pili Pop Español iyo Pili French Pop.
Gawaarida raaxeysiga :
Tababar ujeedadiisu tahay da'da 9 ilaa 13, oo ay ku jiraan lix qaybood oo bilaash ah oo la isticmaalo oo si madax-banaan u shaqeeya. Ujeedada boggan waa si fudud in kor loogu qaado isfahamka luqadaha jacaylka. Lixda luuqadood ee ay khusayso waa Catalan, Isbaanish, Faransiis, Talyaani, Boortaqiis iyo Romanian. Qalabkan calanka ahi wuxuu markaa kor u qaadaa luuqadahan si wadajir ah wuxuuna fududeeyaa isku mar halkii uu ka ahaan lahaa waxbarasho isku xigta.
Waad ku mahadsantahay xulashadan ballaaran, luuqada Don Quixote waxba kuma laha sirtaada!
Hagaha Habboon ee Habboon ee Barashada Isbaanishka May 21st, 2018Tranquillus
horeGo'aan sameynta-Sida loo sameeyo Xulashada Xulashada?
socdaSidee loo hagaajin karaa boggaaga LinkedIn si sahal ah Video2Brain?
Maxaad u baraneysaa luqad cusub?
Hagaha Habboon ee ugu Fiican Habboon Jarmal
Baro Ruush si bilaash ah oo dhakhso leh
Ilaha ugu Sarreeya ee Barashada Ingiriisiga